Ny iPad Pro dia mifanaraka amin'ny Apple Pro Display XDR | Vaovao IPhone
Ny iray amin'ireo zava-baovao avy amin'ny laharana farany an'ny iPad Pro dia hita ao amin'ny mpampitohy USB-C, mpampitohy USB-C izay ahafahantsika mampifandray tsy ny fitaovana fitehirizana ihany, fa koa monitor ivelany, izay ahafahantsika miasa amin'ny fomba mahazo aina kokoa rehefa any an-trano na any amin'ny birao isika.
Andro vitsivitsy izao dia azo atao ny mitahiry ny Mac vaovao sy ny monitor Apple Pro Display XDR vaovao, monitor natao ho an'ny matihanina tsy noho ny vidiny ihany, fa noho ny fiasa omeny antsika ihany koa. Raha toa ianao ka mpampiasa ny iPad Pro sy ny Pro Display XDR vaovao tsara no azontsika.
Ary milaza vaovao tsara aho, satria tamin'ny voalohany ny monitor Apple vaovao dia tsy mifanaraka amin'ny iPad Pro, satria afaka mamaky ao amin'ny lisitry ny fitaovana mifanaraka amin'ity monitor ity amin'ny tranokala Apple ofisialy isika. Soa ihany fa, na dia amin'ny vahaolana 5k aza, izay efa mihoatra ny ampy.
Jonathan Morrison, iray amin'ireo tsara vintana nanararaotra nisedra sy nandinika ny Mac Pro vaovao sy ny monitor Pro Display XDR, dia nizara horonantsary tao amin'ny Twitter izay Hitanay ny iPad Pro 2018 miasa mifandray amin'ny monitor Pro Display XDR.
Araka ny tranokalan'i Apple, ny monitor Pro Display XDR dia mifanaraka amin'ny fomba ofisialy amin'ireo Mac manaraka ireto:
15-inch MacBook Pro (2018 na taty aoriana)
21,5-inch iMac (2019)
Mac rehetra misy seranana Thunderbolt 3 ary Blackmagic eGPU na Blackmagic eGPU Pro
Ity monitor ity dia tsy mifanaraka amin'ny solosaina tantanan'ny macOS Catalina ihany.
Saingy tsy io monitor io irery no mifanentana ihany koa fa tsy misy amin'ireo fitaovana izay mifanaraka amin'ny fomba ofisialy. Ny MacBook 12 mirefy, navoaka tamin'ny 2015 ary najanona tamin'ity taona ity Izy io koa dia manohana ny vahaolana 5K, na dia tena azo inoana aza fa tsy tokony hatao ny miasa isan'andro amin'ity vahaolana ity, satria tsy misy fifandraisana Thuberbolt 3 fa USB-C hifandray amin'ireo mpanara-maso ivelany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » IPad Pro dia mifanaraka amin'ny Apple Pro Display XDR
Apple dia tafiditra amin'ny "Project Connected Home over IP". Ny automatisation an-trano no maherifo